Top Ụzọ Nyefee Videos si Mac ka iPhone na site na iPhone ka Mac
Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla nsogbu nke na-ebufe vidiyo si na iPhone ka Mac ma ọ bụ syncing vidiyo si na Mac ka iPhone, ị nwere ike ịnyagharịa ka yiri akụkụ ịmụta otú dozie nsogbu. Isiokwu a na-ekpuchi 3 akụkụ:
Part 1. Olee mbubata Videos ka iPhone on Mac
Part 2. Top Ụzọ Nyefee Videos si iPhone ka Mac
Part 3. Nchọpụta nsogbu: Nyefee Videos si Mac ka iPhone & si iPhone ka Mac
Copy Video ka iPhone on Mac-enweghị iTunes
Mmekọrịta Videos si Mac ka iPhone na iTunes
Ọ bụrụ na ndị video ị na-aga nyefee si Mac ka iPhone akwadoghi iTunes, ma ọ bụ na ị na-aga na-eji ọzọ Mac idetuo videos gị iPhone, ị ga-agbalị Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Ya-enye gị nyefee fọrọ nke nta ọ bụla video ọ bụla na Mac ka iPhone na ngwa ngwa na-ebufe ọsọ. Na ọ dịghị mgbe erases ọ bụla data na gị iPhone. Lee otú iji ya nyefee vidiyo si na Mac ka iPhone enweghị iTunes.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo Ochie (Mac)
Pịa Download button na-echichi ngwugwu maka Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Mgbe nbudata, wụnye ya ozugbo na gị Mac. Ọ na-akwado OS X 10,11, 10.10, 10,9, 10,8, 10.7 na 10.6 n'ụzọ zuru ezu. Ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone na gị Mac site eriri USB.
Cheta na: m na awa Wondershare TunesGo Ochie Windows version free ikpe a kwa, bụrụ na ị mkpa nyefee vidiyo si na PC na-iPhone.
Nzọụkwụ 2. Copy Videos si Mac ka iPhone
Ị nwere ike ịhụ na e nwere Movies taabụ na sidebar. Pịa ya ịhụ video akara panel. Na window, ị pụrụ ịhụ na taabụ Tinye. Pịa ya na mmapụta elu, na-agagharị gị videos. Pịa Open nyefee vidiyo si na Mac ka iPhone ozugbo. Usoro nile nke na-ebufe vidiyo si na Mac ka iPhone na Wondershare TunesGo Ochie (Mac) na-ewe sekọnd ole na ole. Ọ bụrụ na ndị video ị na-ebufe gị iPhone na-adịghị gị na-akwado iPhone ahụ, e nwere a mmapụta elu agwa gị ka ị tọghata ha mbụ. Dị pịa tọghata. Mgbe akakabarede, na video ga-agafere gị iPhone ozugbo.
Ọ bụrụ na ndị ị na-eme atụmatụ videos ka mmekọrịta si Mac ka iPhone na MP4, M4V, ma ọ bụ MOV formats, mgbe ahụ, i nwere ike iji iTunes na-etinye ha gị Mac. Bụrụ na ọ bụghị, ị kwesịrị ị na-agbalị Wondershare TunesGo Ochie (Mac) nyefee vidiyo si na Mac ka iPhone. Ọ ga-tọghata iPhone kedi videos ka iPhone enyi na enyi usoro. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ ka mmekọrịta vidiyo si na Mac ka iPhone na iTunes.
Nzọụkwụ 1. Tinye vidiyo na iTunes
Ẹkedori iTunes na pịa iTunes File menu nke dị n'akụkụ aka nri nke obere Apple logo n'elu ekpe. Pịa Tinye ka Library na-agagharị na kọmputa gị maka videos na ị chọrọ nyefee si Mac ka iPhone ma tinye ha iTunes Library.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na gị Mac
Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone na gị Mac. Pịa iTunes View menu> Gosi sidebar. Mgbe ahụ, ndabara, ị pụrụ ịhụ gị iPhone bụ n'okpuru ngwaọrụ ke sidebar. Pịa gị iPhone. Na mgbe ahụ n'akụkụ aka nri nke window, ị pụrụ ịhụ Movies taabụ.
Nzọụkwụ 3. Stream Video si Mac ka iPhone
Pịa Movies taabụ na n'akụkụ aka nri nke iTunes Windows. Na mgbe ahụ ego nhọrọ mmekọrịta Movies. Na mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na videos na ị na atụkwasịkwara iTunes Library tupu egosi na Movies ebe. Ego mkpa ndị na pịa Mee nyefee vidiyo si na Mac ka iPhone.
Video Tutorial: otú nyefee Video si Mac ka iPhone
E nwere ọtụtụ ihe ngwọta na-otú nyefee vidiyo si na iPhone ka Mac. Ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ndị na-esonụ ngwọta iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị:
Nyefee Videos si iPhone ka Mac na All-na-otu Ngwọta (ọ bụla Video on iPhone)
Import Videos si iPhone ka Mac na Preview / iPhoto / Image Capture (iPhone gbara Videos)
Get Videos si iPhone ka Mac site Email (iPhone gbara Videos)
Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee vidiyo si na iPhone ka Mac, ọ bụghị nanị iPhone gbara videos, ma ndị a ị na ebudatara ma ọ bụ syned gị iPhone, ị na-kwesŽrŽ iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ ime nke a. Ma, i nwere ike adịghị nyefee ha si iPhone ka Mac. Ebe a, m nwere ike ikwu na ị na-agbalị niile na-na-otu ngwọta - Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Ọ ga-enyere gị aka bulite ọ bụla video si iPhone ka Mac hassle kpam kpam. Na ị pụrụ ime ya na 2 mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye ya na gị Mac. N'ihi na n'aka, ọ bụrụ na gị Mac-agba na OS X 10.6 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, e nweghị incompatibility nsogbu. Mgbe wụnye ya, ẹkedori ya ozugbo.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ gị iPhone na-egosi na Wondershare TunesGo Ochie (Mac) isi window. Na mgbe ahụ ị nwere ike nweta videos anya iPhone ka Mac.
Iji nyefee iPhone gbara vidiyo si na iPhone ka Mac, pịa Photos taabụ. iPhone gbara vidio ndị Chekwa n'ebe iPhone gbara foto ndị. Họrọ chọrọ videos na pịa Export iji nweta vidiyo si na iPhone ka Mac.
Iji nyefee ndị ọzọ iPhone vidiyo si na iPhone ka Mac, pịa Movies taabụ. Wee họrọ videos na nri window na pịa Export. Kọwaa a nchekwa gị Mac ịzọpụta ndị a iPhone exported videos.
Ọ bụrụ na ị na mkpa mbubata iPhone ogbugba vidiyo si na iPhone ka Mac, ị pụrụ ime ka ọtụtụ n'ime Mac wuru na-ngwa, dị ka Preview na Image Capture. Ma nke ha na-enwe ike nyefee iPhone gbara vidiyo si na iPhone ka Mac. Na ọ bụrụ na ị arụnyere iPhoto na gị Mac, i nwere ike iji iPhoto ime ya kwa. Na nzọụkwụ nke iji ha na-bulite vidiyo si na iPhone ka Mac ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ. Lee, m na-iPhoto dị ka ihe atụ iji gosi gị otú ị otú mbubata iPhone ogbugba vidiyo si na iPhone ka Mac.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Jide n'aka na ha jikọọ ọma. Ẹkedori iPhoto si Ngwa nchekwa gị Mac. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ọ bụ, na-eji Chakwasa ihie ịchọ ya. Site na ndabara, ị pụrụ ịhụ na ihe nile iPhone gbara videos na foto na-egosipụta na iPhoto.
Nzọụkwụ 2. Họrọ chọrọ videos na pịa Import Họrọ. Na mgbe ahụ importing usoro amalite. Ọzọ, mgbe window Pop elu na-egosi, agwa gị ka ị Hichapụ Video na gị iPhone? Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wepụ video si gị iPhone mgbe importing ya Mac, ị nwere ike pịa Hichapụ Video. Ma ọ bụ pịa Nọgidenụ Video. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ gị videos na-dị na iPhoto on Mac.
Ọ bụrụ na ndị size maka videos na ị na-aga nyefee si iPhone ka mac bụ na nnukwu, ị nwere ike na-agbalị Email ha. Lee ndị nzọụkwụ:
Kpatụ Photos ngwa na akara ngosi na gị iPhone na ịnyagharịa Igwefoto Roll. Site Igwefoto Roll, ị pụrụ ịhụ videos na ị na gbara na gị iPhone. Kpatụ video gị mkpa ma mgbe ahụ enweta akara ngosi na-akụ elu. Na mmapụta ahụ, pịa Mail. Ọzọ, jupụta na Ama na zipu video ka gị adreesị email gị. Mgbe ọ sịrị video, i nwere ike imeghe nchọgharị weebụ na gị Mac imeghe gị email. Download video si gị email gị Mac. Nke ahụ bụ otú ibudata video si iPhone ka Mac.
Ajụjụ # 1: otú nyefee video m gbara si iPhone 5 m Mac? M nwere iCloud na Photo Stream. iPhoto adịghị egosi ọ bụla nke m videos. M na-ahụ ụfọdụ ndị na-ekwu "email ya" - m maara nke ọ bụla ISP na ga-ekwe ka ihe hà a video ga-emailed.
Azịza: Ọ bụrụ na ndị video gbagburu gị iPhone bụ oke ibu na-Email Mac, ị nwere ndị ọzọ nhọrọ, dị ka iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ nyefee vide si iPhone ka Mac ozugbo, ma ọ bụ iji Preview ma ọ bụ Image kpọọ na gị Mac mbubata videos si iPhone ka Mac. Iji mụta nkọwa maka n'elu kwuru banyere ụzọ, a lee anya na ndị na-esonụ n'akụkụ.
Ajụjụ # 2: m uploaded a video m MacBook na chọrọ ikpụgha video si m Mac m iPhone. Otú ọ dị, o yiri iTunes dị nnọọ ajụ-arụ ọrụ. Olee otú m nwere nyefee video si Mac ka iPhone?
Azịza: Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla nsogbu nke na-eji iTunes nyefee vidiyo si na Mac ka iPhone, i nwere ike ihe mmezi ngwá ọrụ idetuo vidiyo si na Mac ka iPhone enweghị iTunes.
Copy Music si iPhone ka Mac
Export iPhone Photos ka Mac
Nyefee na Ndi ana-akpo si iPhone ka Mac
Ndabere iPhone Data on Mac Computer
Detuo Songs ka iPhone enweghị iTunes
Bugharịa Playlist si iPhone ka iTunes
Mmekọrịta iPhone na Mac
Ịgbanwee si iPhone ka Android
Best iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Ị
Nyefee Data si Samsung ka iPhone
Otú nyefee Gmail Ndi ana-akpo ka iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 5
Tenon Intersystems: iTools (OS X) maka Mac
Olee otú Play, Ụka, na Dezie FLAC Files na Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Free Studio Mac: tọghata Video / Audio / DVD, Ọkụ / Copy DVD, Download Video
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Mac SD Kaadị
> Resource> Mac> eduzi: otú nyefee Videos si iPhone ka Mac na site na Mac ka iPhone